Halista Iniesta & Camp Nou, Xidigaha Ka Maqan, Inay Shaqo U Taalo & Conte U Dar-daarmay Xidigaha Blues %
Tababaraha kooxda kubada cagta Chelsea, ninka lagu magacaabo Antonio Conte ayaa wuxuu sheegay in Andres Iniesta uu yahay ciyaaryahan, kaasoo kubada cagta udhashay, islamarkaana awood badan u leh inuu garoonka wax walba ka sameeyo.
Conte, ayaa wuxuu kaloo xaqiijiyay in ciyaartoyda Rudiger iyo Alvaro Morata, aysan taam u ahayn inay dheelaan kulankaan, waxaana uu intaas ku daray in aysan jirin laacibiin kale, kuwaasoo kooxdiisa kulankaas ka maqnaan doonta.
“Camp Nou, waa garoon kaasoo cajiib ah, misana aad u weyn, uuna jecel yahay ciyaaryahan walba inuu ku dheelo, waxaana ku farax-sanahay inaan dheelo kulankaan, waxaana isku deyi doonaa inaan sameyno wax fiican,” ayuu Conte hadalkiisa ku bilaabay.
“Hadii aad dooneyso inaad wax xoogaa rajo aad yeelato marka aad wajahayso Barcelona, waxaad ubaahan tahay inaad kulan fiican aan dheesho, waxaana usoo sameynay midaas mar sii horeysay,” ayuu raaciyay.
“Barcelona, waxay dooneysaa inay dheesho kubadeeda ayna dhaliso goolal, laakiin waxaa waajib nagu ah inaan is-xoojino.
“Kulankaan waxaan ubaahan nahay inaan meel walba aan ka joogno garoonka, inta uu kulanka socdo, hadii aan dooneyno inaan usoo baxno wareega xiga, waa inaan taasi aan sameynaa,” ayuu sii daba dhigay.
“Iniesta waa ciyaaryahan, kaasoo udhashay kubada cagta, waana mid awood uleh inuu bedalo kulanka, waana mid sax ah inaad ku wajahdo sida sidaadii ugu fiicneed.
“Aniga ahaan waxaan la barbardhigi lahaa [Pirlo], ma ogi hadii uu dheeli karo, laakiin waxaan rajeynayaa in uusan seegin kulanka [oo uu dheelo ciyaarta].
“Rudiger iyo [Alvaro] Morata, waa kuwa dood ay ka taagan tahay inay dheelaan, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan ku dheelno kulanka sida ugu wanaagsan, islamarkaana aan usoo baxno wareega xiga,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Conte.
Antonio ConteBarcelona vs ChelseaChampions League